မာလီစစ်တပ် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင် သေဆုံးသူ ၁၆ ဦးအထိ မြင့်တက် - Xinhua News Agency
ဗာမာလ်ကို၊ အောက်တိုဘာ ၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မာလီနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွင် အောက်တိုဘာ ၆ ရက် ကဖြစ်ပွားသော အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ ၁၆ ဦး နှင့် ဒဏ်ရာရသူ ၉ ဦး ရှိကြောင်း မာလီစစ်တပ် (FAMa) ၏ ဝက်ဆိုက်တွင် အောက်တိုဘာ ၇ ရက်က သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။“၂၀၂၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၆ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် ၁၁း၂၅ နာရီ ဝန်းကျင်က Bandiagara နဲ့ Koro ကြား လမ်းမပေါ်မှာ မာလီစစ်တပ် ယာဉ်တန်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မာလီစစ်တပ် ဘက်က အခြေအနေပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ မာလီစစ်တပ်ဘက်က လူ၁၆ ဦးသေဆုံးပြီး ၉ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်။’’ ဟု မာလီစစ်တပ်ဘက်မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ “ ဒီလိုရဲဝံ့စွာအသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို မာလီတစ်နိုင်ငံလုံးက အလေးပြုနေမှာပါ”
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကထုတ်ပြန်သောကြေညာချက်တွင် စစ်တပ်၏ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာန က စစ်သား၉ ဦး ကျဆုံးပြီး ၁၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိကာအကြမ်းဖက်သမား ၁၅ ဦး နှင့်ဆိုင်ကယ် အစီး ၂၀ ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
မာလီနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် အောက်တိုဘာ ၂ ရက်က တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ယာဉ်တစ်စီးသည် လက်လုပ်မိုင်းထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့ရာ ကုလသမဂ္ဂ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုတပ်ဖွဲ့မှအရာရှိ ၁ ဦးသေဆုံးပြီး ၄ ဦး ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက မာလီနိုင်ငံသည် လုံခြုံရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးတို့ တွင် အဘက်ဘက်မှ အကျပ်အတည်း အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သိရသည်။ ပြည်တွင်းသောင်းကျန်းမှုများ၊ ဂျီဟတ်ဝါဒီများ၏ကျူးကျော်မှုများနှင့်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခများကြောင့် လူထောင်ချီသေဆုံးပြီး သိန်းနှင့်ချီကာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BAMAKO, Oct.7(Xinhua) — The death toll from Wednesday’s terrorist attack in central Mali has risen to 16, with nine wounded, the Malian Armed Forces (FAMa) said on its website Thursday.
“Following the complex terrorist attack perpetrated on Wednesday, October 6, 2021, around 11:25 a.m. againstaconvoy of FAMa on the Bandiagara and Koro road, the balance sheet on the FAMa side has changed. We deplore 16 dead and nine wounded,” the army said. “The entire Malian nation salutes the bravery of these valiant soldiers.”
Inastatement issued on Wednesday, the public relations department of the army establishedaprovisional assessment of nine soldiers killed, 11 wounded, 15 terrorists killed and 20 motorcycles seized.
A peacekeeper of the United Nations was killed and four were seriously injured following the explosion of an artisanal mine hit byamission vehicle in northeastern Mali on Saturday.
Since 2012, Mali has been facing deep and multifaceted crises in security, politics and economy. Local insurrections, jihadist incursions and inter-communal violence have caused thousands of deaths and hundreds of thousands of displacements. Enditem
မာလီနိုင်ငံအသွင်ကူးပြောင်းရေး သမ္မတနှင့် ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်လိုက်ပြီဟု မာလီစစ်တပ် ပြောကြား